Uncategorized – MM Crime
ကင်ဆာရောဂါကိုအမြစ်တွယ်နေတဲ့ ကင်ဆာအဆင့် ၄ _ကို အမြစ်ပါမကျန်အောင်စွဲဖြတ်စေတဲ့ ဆေး နဲ့ ဆေးမြစ်တွေပါ
“ကင်ဆာရောဂါဖြင့် မသေစေရ ” ကင်ဆာရောဂါကိုအမြစ်တွယ်နေတဲ့ ကင်ဆာအဆင့် ၄ _ကို အမြစ်ပါမကျန်အောင်စွဲဖြတ်စေတဲ့ ဆေး နဲ့ ဆေးမြစ်တွေပါ ဦးဏှောက်ကင်ဆာ အဆုတ်ကင်ဆာ အသဲကင်ဆာ အစာအိမ်အူမကြီးးကင်ဆာ သားအိမ်ကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာ လည်ချောင်းကင်ဆာ ပါးစောင်ကင်ဆာ နှာခေါင်းကင်ဆာစတဲ့ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးအား ဆေးသောက်မကြောက်ဖူးဆိုပါက အမြစ်ပါမကျန်ဒီဆေးတွေက ဖြတ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ် စားဆေးနဲ့ ဆေးမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ၎င်းဆေးဖေါ်ပြီးသားအမုန့်နဲ့ ဆေးမြစ်က တော့ ​အောက်ပါပုံကဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ကင်ဆာဆေးအမုန့်ဖေါ်ရန် ( ၁ )ငှက်သိုက် ၅ကျပ် ( ၂)ခအုံးခေါက် ၂ပဲ ( ၃ )ခအုံးမြစ် ၂ပဲ ( ၄ )တောကွမ်းသီးမြစ် ၅ကျပ် ၎င်းဆေးအမယ်များကိုအမုန့်ပြု့၍ အားလုံးရောပြီးသောက်လို့ရပါပြီ ဆေးမြစ်ကတော့ ရင်းတိုက်မြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဆေးမြစ်ကိုဆန်ဆေးရေနဲ့သွေးပြီး ဟင်းစားဇွန်းတဇွန်းတခါသောက် ညမနက်တနေ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက် သောက်ပါက ကင်ဆာအမြစ်များ […]
သေတဲ့အထိ လေမဖြတ့်တဲ့ဆေးနည်း။ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ မှီဝဲလို့လည်း ရတယ် ။
သေတဲ့အထိ လေမဖြတ့်တဲ့ဆေးနည်း။ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ မှီဝဲလို့လည်း ရတယ် ။ (သေတဲ့အထိ လေမဖြတ့်တဲ့ဆေးနည်း) ဆေးနည်းလေးမျှဝေချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်လောက်က နက္ခတရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်ကို လစဉ် ထွက့်တာနဲ့ ဝယ်ပြီးဖတ်တယ် ။ အဲထည်မှာက ဗဟုသုတ မှတ်သားဖွယ်ရာ တွေ အကိုးကား နဲ့ ပါလေ့ရှိတယ် ။ မှတ့်ထားမိတာလေး ပြန်လည်မျှဝေ ဒါပါ ကိုကိုယ်တိုင်လည်း သောက့်သုံးဖူးတယ်။ အရသာက တော့ တော်တော် ခါးတယ်ဗျ အဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ မှီဝဲရ တာလည်း ဝါသနာပါတယ် ။ လိပ့်စာ အတိ့ကျ တော့မမှတ့်မိတော့ပါဘူး မုံရွာနယ်က ကျေးရွာ တရွာက တောကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးတပါးရဲ့ ဆေးနည်လေပါ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ မုံရွာ-မန္တလေး ကားမောင်းသမား တယောက်ဟာ […]
“လူပြောများနေတဲ့ MasterChef Myanmar ရဲ့ ဒိုင်လူကြီး ဦးရဲထွဋ်ဝင်း အကြောင်
“လူပြောများနေတဲ့ MasterChef Myanmar ရဲ့ ဒိုင်လူကြီး ဦးရဲထွဋ်ဝင်း အကြောင်း” ============================================================ MRTV4ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီး လူကြိုက်များနေတဲ့ Reality Show ဖြစ်တဲ့ Master Chef Myanmar မှာ ထူးထူး ခြားခြား စကတ်ကြီး တကားကားနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနေတဲ့ ဒိုင်လူကြီးမင်းတစ်ဦးကို သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက Sharky’s (ရှာကီ) စားသောက်ဆိုင်ခွဲတွေရဲ့ ပိုင်ရှင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရ နေကြသူတိုင်းဟာ အလကားနေရင်း ရုတ်တရက်ကြီး ထပြီး အောင်မြင်လာကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေ မျိုးကို မရောက်ခင်မှာ အခက်အခဲတွေကို တစ်ဆင့်ခြင်း ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာချည်းပါပဲ။ ဒီလိုလူတွေထဲမှာ ဦးရဲထွဋ်ဝင်း (ခ) ဦးရှာကီ လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရဲထွဋ်ဝင်း […]
အားလုံးသိအောင် မျှဝေပေးကြပါနော်…။ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ မိသားစု တရားရုံးကို လာရောက်ထွက်ဆိုတဲ့အခါ အထူးမေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက်.. မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက်
အားလုံးသိအောင် မျှဝေပေးကြပါနော်…။ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ မိသားစု တရားရုံးကို လာရောက်ထွက်ဆိုတဲ့အခါ အထူးမေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက်.. မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက် ******************* . သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ မိသားစု တရားရုံးကို လာရောက်ထွက်ဆိုတဲ့အခါ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အထူးသဖြင့် သမီးလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို မတင်ဖို့ မီဒီယာတွေကို (ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုခွင့်ရှိတာထက်ကျော်လွန်ပြီး) တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ . အကယ်၍များ တင်လာခဲ့ရင်လည်း အဲဒီ ဓာတ်ပုံတွေကို မရှယ်ဖို့ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲသူများကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ . ဒီအချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ စာနာမှု၊ လူသားဆန်မှု မှတ်ကျောက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ သမီလေး အနာဂတ်အတွက် ဒါလေးတော့ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါ။ . . . <zawgyi> ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. […]
” နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာ ရရှိထားသည့် ဆုတံဆိပ်များ”😍
” နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာ ရရှိထားသည့် ဆုတံဆိပ်များ”😍 ( အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကို နိပ်ပါ 👇 ) ကမ္ဘာ့အဆင့်— ၈၄ အမည်— သက်ထားသူဇာ အသက်— ၂၀နှစ် (15/03/1999) နိုင်ငံ— မြန်မာ ￼ Point—19,710 / 10 ဆုတံဆိပ်များ— 2019 Cote d’Ivoire International ချန်ပီယံ 2019 Benin International ချန်ပီယံ ￼ 2019 Mauritius International ချန်ပီယံ 2019 Kenya International ချန်ပီယံ ￼ 2019 Uganda International ချန်ပီယံ 2018 Nepal International ဒုတိယဆု 2018 Egypt […]
မိုးဆက်အားကောင်းနိုင်၍ ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရန် ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး
မိုးဆက်အားကောင်းနိုင်၍ ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရန် ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး ကချင်၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်မှ မြို့နယ် ၁၀ ခု၌ ရေဘေးကြုံတွေ့နေစဉ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နောက်ပိုင်းကစ၍ သိသိ သာသာ မိုးအားကောင်းနိုင်သော ကြောင့် ရေဘေးကြိုတင်ကာ ကွယ်ရေး စနစ်တကျဆောင်ရွက် ထားရန် မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သတိပေး သည်။ လတ်တလော၌ ကချင်ပြည် နယ်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ဗန်း မော်၊ တနိုင်း၊ ဆော့လော်နှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခန္တီး၊ ကသာနှင့် ဟုမ္မ လင်းမြို့၊ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်း မြို့တွင် လူဦးရေ ၄,၀၀၀ ကျော် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်း များတွင် ခိုလှုံနေရသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေ […]
မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၆ ဆင့်ခုန်တတ်
မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၆ ဆင့်ခုန်တတ်​ အိုင်ဗရီကို့စ် နိုင်ငံတကာ ကြက်တောင်ရိုက်ပွဲတွင် ဗိုလ်စွဲပြီးနောက် မြန်မာကြက်တောင်ရိုက်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာသည် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၆ ဆင့်အထိ ခုန်တက်သွားကြောင်း ကြက်တောင်ရိုက်အားကစားအတွက် ကမ္ဘာ့ထုတ်ပြန်သည့် BWF အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ သူမသည် ယခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာ ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်များတွင် ဆက်တိုက်ဆိုသကဲ့သို့ ပထမဆုများ ရရှိနေခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်များ ဆက်တိုက် မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သက်ထားသူဇာသည် ဘီနင်ကြက်တောင်ရိုက်ပွဲ မတိုင်ခင်က ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၁၄ သာရှိခဲ့ရာမှ ယင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရပြီးနောက် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၀၁ သို့လည်းကောင်း၊ ထို့နောက် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည့်ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုထပ်မံရရှိခဲ့သည့်အတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၄ သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ […]
မိခင်ဖြစ်သူကို ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိသတ်လိုက်တဲ့ သားမိုက်
မိခင်ဖြစ်သူကို ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိသတ်လိုက်တဲ့ သားမိုက် ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၉ ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နေ မရွှန်းလဲ့လဲ့ထွေး နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၆၀ ရပ်ကွက်နေ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ထွေးကြည် (၆၄ နှစ်)အား အစ်ကိုဖြစ်သူ စိုင်းကြည်မြင့်(၃၄ နှစ်)က ခေါင်းအုံးဖြင့် ဖိသတ်လိုက်ကြောင်း မိခင်၏ အိမ်နီးချင်း နေထိုင် သူမိတ်ဆွေက အကြောင်းကြားသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ မိခင်မှာ နေအိမ်ရှေ့ခန်းအိပ်ရာအတွင်း ၀ဲပါး၊ ၀ဲနား၊ညိုမဲဒဏ်ရာ နှာခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများ ရရှိသေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူ စိုင်းကြည်မြင့်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်သဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက တစ်ဗျစ်တောက်တောက်ပြောဆိုနေသဖြင့် နားညဉ်းသဖြင့် ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပြီး မှို့ခေါင်းအုံးဖြင့် အပေါ်မှ ဖိရာက သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ […]
Posted on July 9, 2019 Author admin	Comment(0)
ဘယ်ဟာ ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ
ဘယ်ဟာ ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ မီတာ ၁ ယူနစ်ဆိုတာ… 1 KWH ၁ ကီလိုဝပ်နာရီ ဆိုလိုတာက တနာရီအကြာကာလမှာ ၁ ကီလိုဝပ်(1000 ၀ပ်) သုံးစွဲလိုက်ရင် ၁ ယူနစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ရဖို့ မီးသုံးစွဲမှုကို အကြမ်းဖျဉ်း တွက်ကြရအောင်။ ၄ ပေ မီးချောင်း ၁ ချောင်းဟာ ရေဘုယျအားဖြင့် ၄၀ ၀ပ်ပါ။ တနာရီကြာဆက်တိုက်ထွန်းထားရင် သုံးစွဲပမာဏ ၀ပ် ၄၀ ပေါ့။ ၂၅ နာရီကြာသုံးရင် ဝပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်လို့ ၄ မီးချောင်း ၁ ချောင်းကို ၂၅ နာရီကြာသုံးရင် တယူနစ်တက်ပါမယ်။၂ ပေ ချောင်းဆိုရင် နာရီ ၅၀ […]
Posted on June 30, 2019 Author admin	Comment(0)
x”အ​ဖေ” x”သား ဆယ်​တန်းကျတယ်​” နွားစာ​ကျွေး​နေ​သော အ​ဖေ ရုတ်​တရတ်​တုံ့သွားသည်​…… x မီးဖို​ချောင်​ထဲ ထမင်းချက်​​နေ​သော အ​မေက ကြားလိမ့်​မည်​မထင်​။အ​ဖေ စကားတလုံးမှ မ​ပြောပဲ ကျ​တော့်​ကို စူးစိုက်​ကြည့်​​နေသည်​။ x x​”ဟိုးမှာ​တွေ့လား ငါ့သား!!! ဓား ၂​ချောင်းစီ ကျ​တော့်​ကိုညွန်​ပြသည်​ x(စကားလမ်းလွှဲလိုက်​သည်​ဟု ကျ​တော်​ထင်​) x”လှည်း​ပေါ်တင်​ကွာ အ​ဖေနဲ့​လယ်​​တောခဏ လိုက်​ခဲ့ အ​င်္ကျီထူထူ ယူခဲ့ ” x နွားညိုသိုးကြီး ၂​ကောင်​ကိုဆွဲသွားပြီး အ​ဖေ နွားလှည်းတပ်​​နေပြီ ။ကျ​တော်​ အ​ဖေ့​နောက်​မှ ၀င်​ထိုင်​လိုက်​သည်​။(အ​တွေးထဲ ​ကျောင်းများထုတ်​လိုက်​သည်​ဟု ထင်​ခဲ့) x လယ်​​တော​ရောက်​​တော့ အ​ဖေ ကျ​တော့်​ကို ထွန်​တုံးဆင်​​ပေးပြီး ထွန်​ခိုင်းသည်​။ ကျ​တော်​ x​အူ​ကြောင်​​ကြောင်​ဖြစ်​သွားတယ်​။ အ​ဖေ ငါ့ကို တကယ်​များ​ကျောင်းထုတ်​လိုက်​ပြီလား? x ကျ​တော့်ကို တခါမှ အလုပ်​မခိုင်းဘူးခဲ့တဲ့အ​ဖေက ဒီလိုလုပ်​​တော့ […]
Posted on May 28, 2019 Author admin	Comment(0)